Musakurumidza “Kuzununguswa Pakufunga Kwenyu”! — RAIBHURARI YEPAINDANETI yeWatchtower
Nharireyomurindi Yokuzivisa Umambo hwaJehovha—2013
Bhuku reBhaibheri Nhamba 53—2 VaTesaronika
6 Kuti aruramise mafungiro avo, Pauro akataura kuti zuva raJehovha risati rauya, paizova nokutsauka kukuru pakutenda uye “munhu asingateereri mutemo.”* Kana izvozvo zvaitika, Ishe Jesu aizouya panguva yake yakakodzera ‘oparadza’ vose vainge vanyengedzwa. Muapostora wacho akataura kuti vanhu ava vaizoparadzwa nokuti “havana kugamuchira kuda chokwadi.” (2 VaT. 2:3, 8-10) Tinofanira kuzvibvunza kuti: ‘Ndinoda chokwadi zvakadini? Ndinonyatsofambirana here nokujekeswa kuri kuitwa chokwadi mumagazini eNharireyomurindi uye mune mamwe mabhuku anotsanangura Bhaibheri anobudiswa nesangano kuti abatsire vanhu vaMwari?’
Pana Mabasa 20:29, 30, Pauro akataura kuti muungano yechiKristu ‘maizomuka varume vanotaura zvinhu zvisina kururama kuti vatsause vadzidzi vavatevere.’ Nhoroondo inoratidza kuti mashoko aya akatanga kuzadziswa pakwakatanga kuva nemusiyano pakati pevafundisi nevasiri vafundisi. Pakazosvika makore okuma200 C.E., “munhu asingateereri mutemo” akatanga kuoneka, uye akazivikanwa seboka revafundisi vechiKristudhomu.—Ona Nharireyomurindi yaFebruary 1, 1990, mapeji 10-14.